Hospitaalonni naannoo Amaaraatti argaman muraafni tajaajila kenninsa tajaajila fayyaa addaan kutuun isaanii ibsame – ዜና ከምንጩ
Tajaajilli kenninsa fayyaa waliigaltee hospitaaloota waliin qabu tureen tajaajila isaatiif kaffaltiin ga’an isaa kennamu dhabuu isaatiin hospitaaloota muraasa naannoo Amaaraatti argamanitti tajaajillichii akka addaan cite biiroon eegumsa fayyaa naannichaa Addis Maaladaatti himeera. Tajaajilichikan addaan cite hiri’inni faayinaansii mudachuu isaatiin ta’uun ibsameera.
Tajaajjilli kenninsa wal’aansaa kun yammu dhaabbilee fayyaa waliin waliigaltee mallatteessu waggaa guutuu baasii wal’aansaa miseensotaadanda’uudhaaf ta’u isaa biroo eegumsa fayyaa naannoo Amaaraatti dursaa garee tajaajila kenninsa wal’aansaa guutuu hawaasaa IndaalammaawKindee dubbataniiru. Haata’u malee baasiin wal’aansaa amma jiru dabaluu isaatiin waliigalteen kenninsa tajajila wal’aansaa kun dhaabbilee wal’aansaaf bajatnni waggaa kanfalee utuu waggaa hinguutin akka dhumu taasiseera.kanaanishospitaaloota muraasa baajata isaanii fixaniitti tajaajilichi baatii lamaan dura addaan citu isaa eeraniiru.
Dhaabbilee fayyaa naannichaa kenninsa tajaajilaa kunjalaa citee gidduudha hospitaalliDabramaarqoosiifi Goojjaam bahaatti kan argamuhospitaallibiibuny akka keessatti argamu dursaan garee kun Addis Maaladaatti himaniiru.
Kanatti dabalees kaffaltiin buusii isaa xinno ta’uun isaafi lakkofsii miseensotaas gad aanaa ta’uun hiri’inna baajatichaaf sababiin ta’u ibsaniiru. Miseensi kenninsa tajaajila wal’aansaa tokko buusiin miseenssummaa waggaa isaa birrii 350 amma 400 yammu ta’u buusii waggaa kanaa garu baasiin wal’aansaa amma birrii kuma dhibba tokko kan ba’eef jiraachuu eeraniiru.Kunis baajata waggaa dhaabbilee wal’aansaa biratti qabsiisu dafee akka fixutaasisaakun yammu ta’utti immoo waliigalteen dhaabbilee wal’aansaaf kenninsa tajaajila wal’aansaa kana gidduutti taasifamee jiddu jiru akka addaan citu taasisa jedhaniiru.
Tajaajilli hospitaaloota naannichatti argamanitti kennamu addaan cite kun amma baatii Amajjiitti itti fufu akka danda’u mul’ateera. Kun kan ta’es fayyadamtonni tajaajilichaa gara caalu qonnaan bultoota ta’uu isaaniitiin yeroon maallaqa argataniis yeroo homishnni walitti qabamuu baatii Amajjii ta’u isaatiin kaffaltii miseenssummaa kan kanfalangidduu sana ijaa ta’eef.
Rakkinichi baatii Amajjiitti akka hiikamu kan ibsebiirichiamma tajaajilichi buufataalee fayyaa hundaati kennamaa jira waan ta’eef wal’aanamattonni gara buufataalee fayyaa deemuudhaan argachaa turu akka danda’an ibseera.Amma Hospitaalonni naannichatti argaman tajaajilicha kennaa kan jiran yoo ta’es baatiin Amajjii itu hinga’inhospitaalonni biraa baajata isaanii fixan yoo jiraatan tajaajilicha addaan kutu akka danda’an eerameera.
Tajaajila kenninsa tajaajila wal’aansaa kana jalqabsiisuuf jedhamee kaffaltiimiseenssummaa xinnodhaan kan jalqabamee ta’uus mahaalalqni amma walitti bu’u tajaajila amma kennamaa jiru akka wal hin simnnee mul’ateera. Gara fuulduraattis waliigalteen baajatataasifamu dhaabbanni fayyaa aduunyaa namni tokko waggaatti yoo xiqqaate yeroo sadii gara dhaabbilee wal’aansaa deemu qaba isa jedhu baasii wal’aansaa kan danda’u ta’u qaba jechuudhaan ibsaniiru.
Tajaajilli kenninsa tajaajilaa mootummaa irra baajata ijaa hinqabne gara fulduratti lakkofsii miseensotaa akka dabaluu buusiin miseenssummaa akka fooyya’au hojiin galii argamsiisan kan biraa akka hojjetaman yoo taasifamerakkinichi isa waaraaf hiikamu akka danda’u biiroon eegumsa fayyaa yaada kaa’eera. Kanaaniis yaa’iin kenninsa tajaajila wal’aansaa akkuma yeroo hundaa taasisu baatii Amajjiitti rakkoolee waggaa guutuu mudatan irratti mari’achuudhaan rakinicha hiikuuf yaalii akka taasisu Ibsameera.
Walaanamtonni komii isaanii Addis Maaladaaf ibsan gama isaaniitiin buusii kan kanfalan tajaajila waggaa tokkoofta’uuf kan ture ta’us amma hospitaaloota tajaajilichi addaan citeetti sababiin hiri’innamaallaqaawal’aanamuu akka hin dandeenye ibsaniiru.Wal’aansi dhaabbilee fayyaa kanatti hin milkoofne jiraachuu isaaniitiin tajajilichii amma baatii Amajjiitti akka addaan citutaasiisuuf irra qaamni furmaata barbaade qaamni dhimmi isa ilaallaturakkoo isaanii akka hiikuuf gaafataniiru.
Total views : 6982875